Bengal ezimhlophe ihlosi, amazing kanye emangalisayo
Uma phakathi droppings zanoma iluphi uhlobo lwesilwane Uvele wathola ingane nombala omhlophe, khona-ke ngokuvamile umbuzo i-albino. Lesi silwane, abanesikhumba has cishe awekho lesi sakhi, ngenxa yalokho izinwele zakhe uphendulela white, futhi amehlo abe bomvu tint sibonga ayevumela kungekho nto enemibala emihle ngokusebenzisa iris izitsha. Kodwa sizoxoxa lomkhuba emangalisayo bemvelo, ngokuthi "Bengal ezimhlophe yaseBengal." Lena akuyona i-albino. Wakhe uvolo ezimhlophe ehlotshisiwe ngemivimbo nsundu, futhi amehlo akhe babe hlaza kwesibhakabhaka.
amahlosi White - ezingavamile Isenzakalo esingokwemvelo
Ukubukeka phezu ukukhanya okumhlophe tiger - kuguquka esibonakaliswa omunye umuntu ngamunye 10 000 ezijwayelekile umbala obomvu (endleleni, kubonakala kuphela Bengal amahlosi). Lezi zilwane ezingajwayelekile kakhulu endle ngoba impilo ukuthi siphuka kalula futhi enhle yabo, phezu ukunambitheka womuntu, Umbala kuvimbela ekuzingeleni yimpumelelo. Kodwa ama-zoo futhi emasekisini kakhulu othanda blue uneso handsome ekujabulela ukupha kubo. Ngaphezu kwalokho, emhlophe tiger zohlobo esihle besekuthunjweni. Nokho, inzalo umbala enjalo engena ukuba kuphela ngombandela wokuthi womabili abazali nomhlophe.
Ukuphuza amahlosi mhlophe
Endulo kukholakala ukuthi ihlosi omhlophe omlingo futhi, ngakho-ke, ngokuvamile wayenguKristu into ekhonzwayo, totem, bakwazi ukuxazulula izinkinga ukuvikela imimoya emibi.
Izithombe lalesi silwane emangalisayo, isibonelo, ibekwe esangweni amathempeli Taoist. Umhlangano zinaye amaNdiya kwakubhekwa njengesibusiso kuzalwa yokukhanyiselwa ngekusasa lesintu elijabulisayo.
EChina, tiger ezimhlophe ayebhekwa umnakekeli ezweni labafileyo nombusi eside amandla ophilisayo. Phezu kwamathuna izihlobo Chinese kokusiphakamisela ukubaza yakhe itshe ukuletha ukwesaba amademoni, oweza imiphefumulo efile.
Kwenzeka kanjani ukuba amahlosi ezimhlophe basekuthunjweni
Ubude emhlabeni eziqiwini, zikhona 130 zama-white tiger Bengal. bonke bavela kukhokho oyedwa - owesilisa okuthiwa Uthaya.
Ngo-May 1951, India abazingeli ngakhubeka phezu umhume, okwakuwuphawu tiger emhlophe phakathi intsha ezejwayelekile. Maharajah Govindagari wathatha lo mntwana engavamile esigodlweni sakhe, lapho Uthaya futhi waphila iminyaka engu-12.
Ukuze azalelwa ezimhlophe tiger amawundlu, Uthaya zalala yindodakazi yakhe zibomvu. Lokhu sisungula kudingekile kokuzalela imfanelo esikhubazayo - wafika ukukhanyisa eside elindelwe inzalo emhlophe. Futhi ngo-1960, ihlosi wokuqala omhlophe eNdiya futhi sihlaliswe United States National Park e-Washington. Futhi ngokushesha amakati enhle wayamukelekile zonke self-ukuhlonipha zoo zomhlaba.
White Tiger. Izithombe amaqiniso amangalisayo
White Tiger iyona enkulu kunazo zonke wesibili emva Amur. Kungaba nesisindo 300 kg kanye ukufinyelela ubude (ngaphandle umsila) ingaphezu 3 metres.
Thanda izihlobo zayo obomvu, imivimbo emzimbeni kwehlosi ezimhlophe babe iphathini ngabanye esivela nomuntu ngamunye.
amahlosi White babe ukuzwa ezithandekayo emehlweni, okuyinto, kanye amahloni abo kanye ukusiza Amakhosi ehlathini ukuzingela ebusuku futhi ukusinda nge umbala obungajwayelekile. A umchamo ukuthi iphawule indawo yabo, has iphunga lamafutha popcorn.
amahlosi White kakhulu othanda ukubhukuda, bavame ukudlala emanzini, kuyilapho kubantu abadala bayakwazi ukuwela umfula ukuya ukuzingela, breaking ngosuku kuze kufinyelele kuma-30 km.
Kuyinto edabukisayo ukuthi endle, lezi zilwane ezinhle ezimangalisayo cishe akunakwenzeka ukuthola!
I imvilophi ezindawo Zomhlaba iplanethi
Ukuzamazama komhlaba e Greece: zasendulo namuhla
Kalmyk izinyamazane: isithombe kanye nencazelo. izinyamazane Saiga: uhlala kuphi nokuthi yini akudlayo
"I-Volvo C40": izinzuzo nezinkinga, ukubuyekezwa
Ukuganukeja Rostov. Yini ukubona e Rostov-on-Don
Indlebe engaphandle: ukwakheka kwazo, imisebenzi. Ukuvuvukala endlebeni elingaphandle komuntu
Cishe smartphone Nokia Asha 310
Imigomo "Mamba": ukubuyekezwa. "Mamba" - isayithi ukuphola
Kungani izingane ukukhuluma ebuthongweni bakho na? izimbangela
Indlela bachithe imoto? Amathiphu ambalwa
Amasosha angu-58. Amasosha ase-USSR naseRussia. Umlando Wezempi
Indlela yokuvula i-ekhemisi. Amathiphu Wabasaqalayo
Isilinganiselwa amageyimu laptops NoutList.Ru: ukubuyekezwa, izincazelo, izincazelo kanye nokubuyekezwa